အဆိုတော်ထူးအယ်လင်းရဲ့ အစ်မ၊ အစ်ကိုနဲ့ညီ သေနတ်နဲ့အပစ်ခံရပြီး အစ်မဖြစ်သူ မဥမ္မာရှိန် သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်း….. – Cele Snap
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ပြည်သူချစ်အနုပညရှင် အဆိုတော်ထူးအယ်လင်းဟာဆိုရင် အချစ်သီချင်းကောင်းလေးတွေကို အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့သီဆိုနိုင်တဲံအတွက်ကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိထားတာပဲဖြစ် ပါတယ်နော်…။
မတ်လ(၂၇) ၇က်နေ့မှာဆိုရင်တော့ အဆိုတော်ထူးအယ်လင်းရဲ့အကို ၊အစ်မနဲ့ညီဖြစ်သူတို့ ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။မရမ်းကုန်းမြို့နယ်သမိုင်း (၁)ရပ်ကွက်က အဆိုတော် ထူးအယ်လင်း ရဲ့ အမေအိမ်နဲ့ အတူ၁၁လမ်းထဲက ကားတွေကိုရိုက်ခွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ထူးအယ်လင်းရဲ့ မိသားစုအခြေအနေမှာ အကိုအကြီးဆုံးက ဗိုက်ကျည်ရှပ်မှန်ပြီး အချုပ်ကားနဲ့ပါသွားတယ်။
ဗိုက်ကျည်ဆံမှန်တဲ့အမက စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေကနေ ယခုသေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းထူးအယ်လင်းကတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။။ ရာဘာကျည် ခြောက်ချက်ထိတဲ့ ညီအောင်ဖြိုး မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးလို့သိရပြီး အမေဖြစ်သူက လက်ရှိ ကျန်းမာစွာ ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
Source; Htoo El Lynn
ပရိတျသတျကွီးရေ…. ပွညျသူခဈြအနုပညရှငျ အဆိုတျောထူးအယျလငျးဟာဆိုရငျ အခဈြသီခငျြးကောငျးလေးတှကေို အသံပါဝါအားကောငျးကောငျးနဲ့သီဆိုနိုငျတဲံအတှကျကွောငျ့ ပရိတျသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကို တဈခဲနကျခိုငျခိုငျမာမာရှိထားတာပဲဖွဈ ပါတယျနျော…။
မတျလ(၂၇) ရကျနမှေ့ာဆိုရငျတော့ အဆိုတျောထူးအယျလငျးရဲ့အကို ၊အဈမနဲ့ညီဖွဈသူတို့ ပဈခတျခံခဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ.။မရမျးကုနျးမွို့နယျသမိုငျး (၁)ရပျကှကျက အဆိုတျော ထူးအယျလငျး ရဲ့ အမအေိမျနဲ့ အတူ၁၁လမျးထဲက ကားတှကေိုရိုကျခှဲသှားခဲ့ပါတယျ။ ထူးအယျလငျးရဲ့ မိသားစုအခွအေနမှော အကိုအကွီးဆုံးက ဗိုကျကညျြရှပျမှနျပွီး အခြုပျကားနဲ့ပါသှားတယျ။
ဗိုကျကညျြဆံမှနျတဲ့အမက စိုးရိမျရတဲ့ အခွအေနကေနေ ယခုသဆေုံးသှားတဲ့အကွောငျးထူးအယျလငျးကတငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။။ ရာဘာကညျြ ခွောကျခကျြထိတဲ့ ညီအောငျဖွိုး မစိုးရိမျရတော့ဘူးလို့သိရပွီး အမဖွေဈသူက လကျရှိ ကနျြးမာစှာ ရှိကွောငျးသိရပါတယျ။